प्रहरीमाथि नै आक्रमणको योजना बनाउने गिरोह गौचन हत्यामा संलग्न ? - Dainik Nepal
प्रहरीमाथि नै आक्रमणको योजना बनाउने गिरोह गौचन हत्यामा संलग्न ?
दैनिक नेपाल २०७४ असोज २६ गते ६:२७
काठमाडौं, २६ असोज । सिंगो सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या हुँदा समेत प्रहरीले अहिलेसम्म हत्याराको पहिचान गर्न सकेको छैन ।
यद्यपि प्रहरीका छुट्टा छुट्टै निकायहरुले शंकास्पद गुण्डा नाइके समूहमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
त्यस्तै गौचनका विरोधी ठेकेदाहरुको गुण्डा नाइकेहरुसँगको कनेक्सनको बारेमा पनि प्रहरीको अनुन्धान मोडिएको स्रोत बताउँछ । घटनाको जिम्मा लिने मनोज पुन समूहले अध्यक्ष गौचनसँग रकम माग गरेको थियो या थिएन ? भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको थियो ।
भारतमा पुन र बस्नेतको भेट भएपछि योजनावद्ध रुपमा उनीहरुले एउटै समूह बनाई नेपाली व्यवसायीहरुबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।
घटनाको जिम्मा लिने लोप्साङ राईले यसअघि काभ्रेली गुण्डा नाइके दावा लामामाथि पनि आफूले नै गोली चलाएको भन्दै प्रहरी र विभिन्न व्यक्तिलाई फोन गरेका थिए । राइले बस्नेत र पुनका लागि काम गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रहरीका केही उच्च अधिकारीसँग बस्नेतको उठबस रहेको हुँदा उनले प्रविधिको पनि दुरुपयोग गरी व्यापारीसँग फिरौती असुल्दै आएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।